ကိုယ်ပြုတဲ့အမှု သေးငယ် နည်းပါးတာကိုပြောချင်ရင် ‘၂ ဆင့်’ လို့ပြောတယ်။ ‘၂ ပဲနိ’ ကနေဆက်သုံးလာတာပါ။ ဒီအတွက် တင်စားချက် မြန်မာအသုံးအစစ်ကို လောကသာရပျို့မှာတွေ့ရပါတယ်။ “စေ့မြေ့သိပ်သည်း၊ ရွေ့ရွေ့ဆည်းလော့၊ စရည်းအိုးခွက်၊ ကြီးစွာလျက်လျှင်၊ စဉ်ဆက်ကျများ၊ ပြည့်သောလားသို့၊ ပျား၏နည်းထုံး မှတ်ကျင့်သုံး၍၊ ခြပုန်းတောင်ပို့ ဖို့သည့်ခြင်းရာ၊ လူလိမ္မာတို့၊ ဥစ္စာဆည်းထွေ၊ တတ်လှစေလော့၊ ကြွက်သေတခု၊ အရင်းပြု၍၊ ကြွယ်မှုတတ်ဆုံး၊ သေဋ္ဌေးထုံးကို၊ နှလုံးမူလျက်၊ ကြံစည်နက်ကို။ သူ့ထက်လွန်ကဲ ကြိုးစေမင်း။” မြန်မာစာအရေးအသားမှာ နေရာတကာမှာ ‘စသတ်’ ထည့်ခိုင်းခဲ့တာက ဦးနေဝင်း ခေတ်ကတည်းက အမိန့်နဲ့ လုပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း စာ ၁-၂ ပုဒ်မှာရေးခဲ့ပါတယ်။ လောကသာရပျို့မူရင်းကိုဖတ်ရင် ‘တစက်’ ကို ‘တစ်စက်’ လို့ မရေးတာကို တွေ့ရပါမယ်။ •	Spelling error မှားရေးမိတာလား၊ အမှားကိုအမှန်ထင်နေတာလား http://my-sayawun-life.blogspot.in/2014/09/spelling-error.html •	Spelling အစိုးရ သတ်ပုံတော့ ပြောမနေနဲ့ http://my-sayawun-life.blogspot.in/2014/09/spelling.html အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျားကို ကိုလိုနီခေတ်မှာ မြန်မာ့ပညာရေး မြင့်မားလာစေရန် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ‘အမျိုးသားပညာရေးလောကတွင် ဦးဖိုးကျားသည် ကျော်ကြားသော ခေါင်းဆောင်ကြီးတဦး ဖြစ်သည်’ လို့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ ၇၊ စာမျက်နှာ ၂၉၂-၂၉၃ မှာ ရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။ ‘မြန်မာစာပေလောက၌ ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်းဖြစ်သည်။’ ‘ပုသိမ်မြို့ တိုင်တရာ (စကောကရင်) ကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြား’ လို့လဲ စွယ်စုံကျမ်းမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မူရင်းစာအုပ်ထဲမှာမို့ ‘ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ဦး’၊ ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး’ လို့ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၁ဝ၊ အောက်တိုဘာလထုတ် မြန်မာသစ် ရသစုံမဂ္ဂဇင်း၊ စာမျက်နှာ ၉၉ မှာ သာရဝေါစိုးကြည် ရေးသားတဲ့ အမျိုးသားပညာဝန်ဦးဖိုးကျားဆောင်းပါးမှာ ကျောင်းနာမည်ဟာ ‘တိုင်တစ်ရာ’ ဖြစ်သွားရတော့တယ်။ ဒီမဂ္ဂဇင်းဟာ စာပေတန်ဘိုးအတွက် အားထားရတဲ့အတန်းအစား ဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ခေတ်က ထုတ်ဝေတာဖြစ်လို့ နေမှာပါ။ လွန်ဆန်လို့ရသမျှ လွန်ဆန်ကျော်လွှားသင့်ကြပါပြီ။
1.	MCN TV News မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ ရာခိုင်နှုန်း အစမတန်ပိုမိုများပြားနေတယ်လို့ အချက်အလက်ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကိုးကားပြီး အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာတင့်တင့်ကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ (အဆမတန် လို့ရေးရပါမယ်။)
2.	အကျအနလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ အဲဒီ MCN TV News မှာဘဲ တခုထပ်တွေ့ပြန်ပါတယ်။ “အမြင့်ပေ မီတာ ၄၀၀၀ ရှိတဲ့ မီးရထားလမ်း Bolivia မှာဖွင့်လှစ်” တဲ့။ ပေ နဲ့ မီတာ အတူတွဲမသုံးသင့်ပါ။ မီးရထားလမ်းဆိုတာ အလျားလိုက် အရှည်ဖြစ်တယ်။ အမြင့်မဟုတ်ပါ။ မီတာ ၄ဝဝဝ ရှည်တဲ့ မီးရထားလမ်းလို့သာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ မြင့်တဲ့နေရာမှာတည်ဆောက်ထားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 3.	၁-၅-၂ဝ၁၄ နေ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဆေးခန်း-ဆေးရုံတခုက အပြာရောင် ဆိုင်းဘုတ်လေးတခု တွေ့လာတယ်။ 'အာထွာရာစောင်းစခန်း' တဲ့။ ('အာလ်ထွာဆောင်း' လို့ဖြစ်သင့်တာပါ။ ‘အာထွာဆောင်း’ ဆိုလဲ ရပါတယ်။) 4.	၃-၅-၂ဝ၁၄ နေ့မှာ မော်ဒယ် မိန်းကလေးတယောက် ရင်ပတ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ဖိပြီး ပါးစပ်လေးဟနေတဲ့ ပုံအောက်မှာ ‘ရှင်ထဲကို ထိသွားတာဘဲ ဟယ်’ ဆိုပြီးရေးထာ တွေ့ရပြန်တယ်။ (ရင်ထဲလို့ ရေးရပါမယ်။)
ကျွန်တော့်ဆီ ကျန်းမာရေး၊ နိုင်ငံရေး မေးလာ၊ ရေးလာတာတွေကို အများစုက ဖုန်းပေါ်မှာစာရိုက်ကြရလို့ ထင်ပါတယ်၊ သတ်ပုံ၊ စာရိုက်တွေ အတော်လွဲတာတွေ့ရတယ်။ အထက်က နမူနာတွေကတော့ သတင်းခေါင်းစဉ်တွေ၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ သွက်သွက်ခါ မှားနေတာပါ။ ဆေးပညာစာရေးသူက မြန်မာစာ ကျူရှင်ဆရာ လုပ်ပါရစေ။ “စာရေးရင် ဖတ်တဲ့သူနားလည်ဘို့က ပိုအရေးကြီးတယ်” လို့ လျှောက်လဲချက်မျိုး ကြားလာရတယ်။ ကျွန်တော်တော့ သဘောမတူပါ။ ဆိုပါစို့ လုံခြုံအောင်တော့ ဝတ်ထားပါရဲ့ အင်္ကျီကြယ်သီး အထက်အောက် လွဲတပ်ထားသလိုနဲ့ တူမနေဘူးလား ဆရာဝန်တွေဆိုတာ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးကို အမြဲကြည့်ကြရပါတယ်။ သီချင်းဆိုတာ၊ ရေဒီယိုမှာလာတဲ့ အသံတွေမှာလဲ တိုင်းရင်းသားမို့ မပီသတာ နားလည်ပါတယ်။ ရွှေဗမာများလဲ ‘စ’ နဲ့ ‘ဆ’ လွဲတယ်။ ‘က’ သတ်နဲ့ ‘တ’ သတ်၊ မကွဲကြပါ။ ခပ်ဝဲဝဲ၊ ခပ်ချွဲချွဲ စကားဆိုတာ နှစ်ကိုယ်ကြားတော့ ပြောချင်ပြောပေါ။ အများကြားဘို့ ပြောကြရတာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်စာ၊ ကိုယ့်စကားကို ကိုယ်တိုင် ဖျက်နေကြလို့ ဆရာဝန် မကုနိုင်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်နေတာ စိတ်မကောင်းပါခင်ဗျား။ အောက်ကနမူနာတွေနောက်မှာ အဲလောက်နီးပါး ရှိပါသေးတယ်။ မမှတ်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။ ဇာတ်ကြော်ကအမြဲတမ်းနာနေတယ် = ဇက်ကြောကအမြဲတမ်းနာနေတယ်
ဖြင့်တာ၁နှစ်ကျော်လောက် = ဖြစ်တာ ၁ နှစ်ကျော်လောက်
အရမ်းငြောင်းငြာကိုက်ခဲတယ် = အရမ်းညောင်းညာကိုက်ခဲတယ်
နာကြဉ်ကိုက်ခဲနေတယ် = နာကျင်ကိုက်ခဲနေတယ်
ရာသီသွေး ဆင်း ရွေ့ ၂ရက်မြောက် နေ့ မှာ = ရာသီသွေး ဆင်း၍ ၂ ရက်မြောက်နေ့မှာ
နောက်အကြိန်များတွင်လဲ = နောက်အကြိမ်များတွင်လဲ
အသက်ကတော့ 30 ရှိပြီ = အသက်ကတော့ ၃ဝ ရှိပြီ
မိန်း မရော. ခလေး ပါ. = မိန်းမရော၊ ကလေးပါ၊
သိချင်ဒါ = သိချင်တာက
အတူ2နေပြီးရင် = အတူတူနေပြီးရင်
တီဗွီရောဂါ = တီဘီရောဂါ
အစိုးဆုံးပါ = အဆိုးဆုံးပါ
အနီးဆက်စုံး = အနီးစပ်ဆုံး
ကွန်ဒွန်၊ ကွန်ဒို = ကွန်ဒွမ်
ဌက်နှစ်ကောင်တံဆိပ် = ငှက်နှစ်ကောင်တံဆိပ်
သမီး ခလေးအရမ်း လိုချင်ပေမဲ့ = သမီး ကလေးအရမ်း လိုချင်ပေမဲ့
ဂရုဏာ တရားတွေကို = ကရုဏာ တရားတွေကို
လိပ်ဂေါင်းရောဂါ = လိပ်ခေါင်းရောဂါ
ဖျားပြီးတော.ချောင်းဆိုးချွဲကျပ် = ဖျားပြီးတော့ ချောင်းဆိုးချွဲကြပ်
ကျွန်တော် မန်းလေးက = ကျွန်တော် မန္တလေးက
ဟိုဟာမလာတာလည်း = ရာသီ/ဓမ္မတာ မလာတာလည်း
ဆ၇ာဝန်နဲ့ ဘဲပြကြိလိုက်တော့ = ဆရာဝန်နဲ့ဘဲ ပြကြည့်လိုက်တော့
အ၇က်ကဒေါ့ = အရက်ကတော့
ဖြစ်ခါစ = ဖြစ်ကာစ
အရေပြား ဆက်ဆက်မူ အပိုင်းမှာ = အရေပြား ဆက်စပ်မူ အပိုင်းမှာ
မျှားနှင့်ကဒ် = မြားနှင့်ကဒ်
စအုံနဲ့ = စအိုနဲ့
တုတ်ရည်ထွက်နိုင်ပါသလား = သုက်ရည်ထွက်နိုင်ပါသလား
စာရေးပီးမေးပါရစေ = စာရေးပြီး မေးပါရစေ
မ၇ှိူဘူးစိုဆ၇ာ = မရှိဘူးဆိုဆရာ
5မိနစ်လောက် = ၅ မိနစ်လောက်
ဆက်စံတဲ့အခါ၅မီးနစ်၁၀မီးဆို = ဆက်ဆံတဲ့အခါ ၅ မိနစ် ၁ဝ မိနစ်ဆို
၁ ၇က် = ၁ ရက်
အနာသဏ္ဍာန် = အနာသဏ္ဌာန်
ပိုပြီးအစဉ်ပြေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် = ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ပျော်စေပြတ်စေသဘောနဲ့ = ပျော်စေပျက်စေသဘောနဲ့
အနာဂါတ် = အနာဂတ်
ဒါဏ်ရာ = ဒဏ်ရာ
မခန်မရပ် နိုင်အောင်နာကျဉ်လေ့ရှိပါတယ် = မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်လေ့ရှိပါတယ်
အရန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် = အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
သယ်ရင်းတွေကပြောပါတယ် = သူငယ်ချင်းတွေက ပြောပါတယ်
အန္ဒရယ်ရနိုင်သလား = အန္တရာယ်ရနိုင်သလား
ဆရာ့စီကနေလည်းသိချင်လို့ပါ = ဆရာ့ဆီကနေလည်းသိချင်လို့ပါ
သွားထက်မစိုက်ဖြစ်ဘူး = သွားထပ်မစိုက်ဖြစ်ဘူး
တဝက်တပြတ်လောက်မှာ = တဝက်တပျက်လောက်မှာ
မျက်စီးကိုက်တတ်တဲ့ရောဂါဖြစ်နေပါတယ် မျက်စီးကိုက်ရင်ခေါင်းပါ ကိုက်ပါတယ်တဲ့။ မျက်စိကိုက်တတ်တဲ့ရောဂါဖြစ်နေပါတယ်၊ = မျက်စိကိုက်ရင် ခေါင်းပါ ကိုက်ပါတယ်တဲ့။
အခုထိသွေးစင်းနေတာ = အခုထိသွေးဆင်းနေတာ
ကိုယ်ဝင်3လ = ကိုယ်ဝန် ၃ လ
စောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ = ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေ
၁လပိုင်း၁ရက်နေ့ကလက်ထက်ပါတယ် = ၁ လပိုင်း၊ ၁ ရက်နေ့က လက်ထပ်ပါတယ်
သမီးနံမည် = သမီးနာမည်
ပါတဂူနဲ့ ပြဖို့ကြတော့လဲ = ပါရဂူနဲ့ ပြဖို့ကြတော့လဲ
ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှု = ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
ဆက်ဆံပြီးဘယ်၂ရက်မြောက်နေ့ မှာ = ဆက်ဆံပြီးဘယ်နှစ်ရက်မြောက်နေ့ မှာ
စာကိုလက်ခံရရှိပါတယ် သယ်ရင်း..... စာကိုလက်ခံရရှိပါတယ် သူငယ်ချင်း
အ၇င်၇ည်စား ၇ှိဘူးပါတယ် ၅ေ၇ာက် လောက်ပါ ။ = အရင်ရည်စား ရှိဘူးပါတယ်၊ ၅ ယောက်လောက်ပါ။
ဆစ်ဆစ်နဲ့ကိုက်နေပါတယ်။ = စစ်စစ်နဲ့ ကိုက်နေပါတယ်။
အပေါက်ဝပုံသဏ္ဍာန်ကိုသ်ချင်ပါတယ် = အပေါက်ဝပုံသဏ္ဌာန်ကို သိချင်ပါတယ်
ဆရာစီကအဖြေလေးလည်းသိချင်လို့ပါ = ဆရာဆီကအဖြေလေးလည်း သိချင်လို့ပါ
ကျွန်တော် ဒိုလင်မယားမှာ = ကျွန်တော်တို့ လင်မယားမှာ
လိုချင် ရက်နက် = လိုချင်လျှက်နဲ့
စီးဆစ်ဖို့ ထပ်လိုမလို = ဆီးစစ်ဖို့ ထပ်လိုမလို
ပါတဂူဆီမှာ = ပါရဂူဆီမှာ
အရိုးအစစ်ကြီးပါတယ်။ = အရိုးအဆစ်ကြီးပါတယ်။
သူများအိမ်ခေါင်မိုး ကြည့်ပြောချင်သူဟာ ကိုယ့်တံစက်မြိတ်ကိုလဲ သိရတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်ရေးထားတောတွေကို ပြန်ပြန်စစ်ပြီး ပြင်နေရသူသာဖြစ်ပါတယ်။ • အစိုးရ သတ်ပုံတော့ ပြောမနေနဲ့ http://my-sayawun-life.blogspot.in/2012/12/blog-post.html
Spelling အစိုးရ သတ်ပုံတော့ ပြောမနေနဲ့ စစ်အစိုးရတွေ စလေကတည်းက လူတွေကိုသတ်ခဲ့တာကို ပြောနေကြတာ ကြာပါပကော။ နောက်သတ်ပုံတခုကို ပြောပါရစေ။
လက်ပန်းတောင်း ကြေးနီမိုင်းအရေးအခင်းအဆက်၊ ၁၂-၁၂-၂ဝ၁၂ က အမြို့မြို့ အနယ်နယ်မှာ သံဃာတော်တွေက ထပ်ပြီး ဆန္ဒပြကြတဲ့အခါ သမတရဲ့ ပြန်ကြားစာဆိုတာကို ဆရာတော်ကြီးတွေထံ လိုက်လံဆက်ကပ်ပါသတဲ့။ စာထဲမှာ ‘ထိမ်းသိမ်း’ လို့ စာရိုက်ထားတယ်။ ‘ထိန်းသိမ်း’ သာဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါနဲ့ ‘အမှားများသော အစိုးရ’ လို့ ၁၂-၁၂-၁၂ နေ့ကဘဲ ‘ဖေ့စ်ဘွတ်’ မှာ ‘ကွန်မင့်’ ရေးခဲ့တယ်။ စာရိုက်လွဲမှားတာက သမတရုံးအထိဆိုတော့ ခေါင်မိုးမလုံတာပေါ့။ ဒါက လက်ရှိ အစိုးရပါ။
ခေါင်မိုးဖျက်ခဲ့တာက ဦးနေဝင်းအစိုးရဖြစ်တယ်။ ‘မဆလ’ လက်ထက်ကစပြီး မြန်မာစာသတ်ပုံတွေ အာဏာနဲ့ ပြင်စေခဲ့တယ်။ (တ) ဖြစ်ရမှာတွေကို (တစ်) ‘စသတ်’ တွေထည့်စေခဲ့တယ်။ မြန်မာအဘိဓာန်၊ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်၊ မြန်မာစာသတ်ပုံကျမ်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်သမျှလဲ ‘တစ်’ တွေချည်းဘဲ။ အစိုးရသတင်းစာ၊ ဘယ်သူက ပုံနှိပ်တာဖြစ်ဖြစ် ‘တစ်’။ အရင်ကထုတ်ခဲ့၊ ရေးခဲ့တာတွေကို ပြန်ထုတ်လဲ မူရင်းသတ်ပုံတွေကို ပြင်ပေးမှ ထုတ်ရတယ်။ ဗန်းမော်တင်အောင်ဝတ္ထုက ‘ဘုန်းမောင်တစ်ယောက်ထဲရယ်’ ဖြစ်မှ ရတော့တယ်။ မင်းဆွေ ရဲ့ ‘ဒါး’ က ‘ဓါး’ ဖြစ်သွားတယ်။ စစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်း ‘ငမဲ’ က ‘ငမည်း’ ဖြစ်လာပြီး၊ မြတ်ထန် ရဲ့ ‘နှောင်းတမြေ့မြေ့’ က ‘နှောင်းတမြည့်မြည့်’ ဖြစ်လာရတယ်။ လင်းယုန်သစ်လွင် ချွေးတပ်စခန်းထဲက ‘ယိုးဒယား’ က ‘ထိုင်း’ ဖြစ်လာရသေးတယ်။ စွယ်စုံကျမ်းမှာ ‘ထိုင်းလင်းနိုင်ငံ’ လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး၊ မြန်မာတို့က ယိုးဒယားနိုင်ငံလို့ခေါ်ကြောင်း ရေးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ် အတိုကောက် ‘ထိုင်း’ လို့ လူသုံးများလာတယ်။ ဒိနောက်မှာ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ‘ယိုးဒယား’ လို့သာ ခေါ်ကိုခေါ်ရမယ်၊ ရေးမယ်လို့ ပြင်ပြီးသတ်မှတ်လာခဲ့တာ သိပ်ကြီး မကြာလှသေးပါ။ အမှန်မို့ ပြန်ပြင်တာမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီအရ ဖြစ်ပါမယ်။ ‘ထိုင်းအဲယားဝေး’ ကို ‘ယိုးဒယားအဲယားဝေး’ အလုပ်မခိုင်းတာ တော်သေးရဲ့။
ဆေးပညာ-စာရေးသူ (၄) အောက်မှာ မှတ်ချက်ပေးသူတဦးက ‘ဆရာပြောတာဟုတ်ပါတယ်။ အခုဖေ့ဘုတ်မှာ ကလေးတွေရေးနေတာမြင်ရတာ စာလုံးပေါင်း တလွဲတွေနဲ့ ထွင်ရေးနေတာတွေ့တော့ မြန်မာစာအတွက်ရင်လေးစရာပါပဲ။’ နောက်တဦးက ‘ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ‘စောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန’ လို့ရေးတာကို ပြောပြပါတယ်။
ကျန်းမာရေးမေးခွန်တွေမှာတော့ ကလေးတွေမဟုတ်၊ လူကြီးတွေက မှားရေးနေကြတာပါ။ အသက်၊ ကျား-မ လဲပါလို့ သိရတာပါ။ ၁-၅-၂ဝ၁၄ နေ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဆေးခန်း-ဆေးရုံတခုက အပြာရောင် ဆိုင်းဘုတ်လေးတခု တွေ့လာတယ်။ 'အာထွာရာစောင်းစခန်း' တဲ့။ 'အာလ်ထွာဆောင်း' လို့ဖြစ်သင့်တာပါ။ 'အာထွာဆောင်း' ဆိုလဲရတာပါ။ ၃-၅-၂ဝ၁၄ နေ့မှာ မော်ဒယ်မိန်းကလေးတယောက် ရင်ပတ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ဖိပြီး ပါးစပ်လေးဟနေတဲ့ပုံအောက်မှာ ‘ရှင်ထဲကို ထိသွားတာဘဲ ဟယ်’ ဆိုပြီးရေးထာ တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျားကို ကိုလိုနီခေတ်မှာ မြန်မာ့ပညာရေး မြင့်မားလာစေရန် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ‘အမျိုးသားပညာရေးလောကတွင် ဦးဖိုးကျားသည် ကျော်ကြားသော ခေါင်းဆောင်ကြီးတဦး ဖြစ်သည်’ လို့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ ၇၊ စာမျက်နှာ ၂၉၂-၂၉၃ မှာ ရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။ ‘မြန်မာစာပေလောက၌ ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးလည်းဖြစ်သည်။’ ‘ပုသိမ်မြို့ တိုင်တရာ (စကောကရင်) ကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြား’ လို့လဲ စွယ်စုံကျမ်းမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မူရင်းစာအုပ်ထဲမှာမို့ ‘ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ဦး’၊ ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး’ လို့ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၁ဝ၊ အောက်တိုဘာလထုတ် မြန်မာသစ် ရသစုံမဂ္ဂဇင်း၊ စာမျက်နှာ ၉၉ မှာ သာရဝေါစိုးကြည်ရေးသားတဲ့ အမျိုးသားပညာဝန်ဦးဖိုးကျားဆောင်းပါးမှာ ကျောင်းနာမည်ဟာ ‘တိုင်တစ်ရာ’ ဖြစ်သွားရတော့တယ်။ ဒီမဂ္ဂဇင်းဟာ စာပေတန်ဘိုးအတွက် အားထားရတဲ့ အတန်းအစား ဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ခေတ်က ထုတ်ဝေတာဖြစ်လို့ နေမှာပါ။ ‘မြန်မာ့ပညာရေး မြင့်မားလာစေရန်အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူကို ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းနာမည်ကို ပြောင်းခဲ့ကတည်းက အမျိုးသားပညာရေးဟာ ကျဆင်းဆုတ်ယုတ်လာတာ ဖြစ်တယ်။’ ပြန်ပြင်၊ ပြန်တင်ကြဘို့ အချိန်သင့်ပြီ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်တော် မှားရေး၊ လွဲရိုက်နေတာတွေကိုလဲ ပြင်ပေးကြစေချင်ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်ရောက်ပြန်ပါပြီ။ အသက်ကိုပြောကြရင် ကျွန်တော်တို့က (၉ဝ) သမားတွေဆိုတော့ ၂ နှစ် ငယ်ကြတယ်။ ပြည်ပထွက်ရသူတယောက်ရဲ့ ဝေဒနာလေးတွေ နဲနဲလောက်ပြောပါရစေ။
ပြည်ပမှာ NLD ဖြစ်နေတာက တဝက်ကတော့ ကောင်းပြီး၊ ကျန်တဝက်က ကျွန်တော်တို့ကို ကြည့်မရကြဘူးနဲ့တူတယ်။ ပါတီဝင်ထဲကတချို့ကလဲ အနေမတတ်တာလေးတွေ ရှိတာကိုး။ အမှန်က NLD ဆိုတာ အရေးအခင်းကြီးထဲကနေ ဆက်ဖွဲ့လိုက်တာမို့ အစုံပါတယ်။ ဒါလဲ ဖြစ်ရမှာပါ။ ဆူကြုံနိမ့်မြင့် မခွဲရဘူးမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်ကတော့ ပါတီထဲမှာ အထမ်းအပိုးလုပ်ရသူလဲ NLD လို့သဘောထားတာပါ။ ဒီမိုကရေစီဆိုပေမဲ့ NLD ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေနဲ့ အနှစ် ၂ဝ လက်တွဲခဲ့ရပါတယ်။
ပြည်ပမှာ ဆရာဝန်ဖြစ်နေတာကလဲ မကောင်းတဝက်၊ ကောင်းတဝက်ဘဲ။ ၁၉၈၈ ကာလမှာ ကျောင်းသားတွေ၊ လူငယ်တွေ အများစုက လက်ဝဲစာပေနဲ့ ရင်းနှီးပြီး၊ “ချေဂွေဗားရား” အတော်ကိုအားကျကြတယ်။ လက်ဝဲကိုလဲ တလွဲယူကြပုံရတယ်။ ဆင်းရဲမှလက်ဝဲ ထင်သူတွေလဲ ရှိတယ်။ မြို့ကြီးပြကြီးက တိုက်ခန်းမှာနေရပေမဲ့ တောထဲ တောင်ထဲမှာ နေရသလို နေပြတာက မွန်မြတ်တယ် ထင်ကြသူတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော့် အသက်မွေးမှုက ဆရာဝန်ဆိုတော့ သူတို့အမြင်မှာ တမျိုးထင်ကြပုံရတယ်။ သူများလိုမနေတာက ထူးနေတယ်လို့အထင်ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ကျောပိုးအိတ်တလုံးနဲ့ ထွက်ပြေးလာတာပါဘဲ။ နေတာထိုင်တာတော့ သန့်ရှင်းရေးစတာမျိုး ဂရုစိုက်တာပေါ့။ ဒီအစာမကျေရောဂါကိုလဲ ၁ဝ နှစ်လောက်စောင့်မှ ပျောက်တယ်။
ပြည်ပမှာ ဇာတိ၊ မျိုးရိုးနဲ့ လိင်ကို တမျိုးအထင်ခံရတာလဲရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်က ဗမာ၊ အညာသား၊ ယောက်ျား။ NGO တွေက တိုင်းရင်းသားမှ တိုင်းရင်းသား၊ အမျိုးသမီးမှ အမျိုးသမီး ဖြစ်နေကြတော့ ဗမာတွေ၊ ယောက်ျားတွေမှာ နေစရာ တကယ်မရှိကြပါ။ စစ်တပ်ကတော့ ဘယ်သူ့မှ ဘာကိုမှရွေးပြီး ဖိနှိပ်တာမဟုတ်ပါ။ တချို့ NGO တွေကလဲ ဗမာမဟုတ်ရင် ပြီးရောတဲ့။ ရွှေဗမာနှစ်ခါနာ ဖြစ်ရတယ်။ အပြင်မှာ အဲလို မလိုအပ်ဘဲအခွဲခံကြရတာကနေ နားလည်မှုရအောင် အနည်းဆုံး ၁၅ နှစ်ကြာခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်းသက်သာလာပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
“သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက်”၊ “သဘိ-သဘိ မှောက်မှောက်”၊ ဆိုတဲ့သံပြိုင် ဟစ်ကြွေးသံတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်အိပ်ယာက နိုးလာခဲ့တာဟာ ၈-၈-၁၉၈၈ မနက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကြီးဆုံးသားနဲ့ ထားဝယ် သတ္တုတွင်းတည်းခိုရိပ်သာမှာ တည်းခိုနေကြရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဆရာဝန် ဖြစ်ကတည်းက အညာဒေသခေါ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲမှာသာ တောက်လျှောက် တာဝန်ကျနေရာကနေ ထားဝယ်မြို့နယ်၊ ဟိန်းဇဲသတ္တုတွင်းဆရာဝန်အဖြစ်ရွေ့ပြောင်းခံရလို့ တာဝန်ထမ်းနေခဲ့တာ တပါတ်တိတိသာ ရှိပါသေးတယ်။ ထားဝယ်မြို့ထဲ လျှောက်ကြည့်ကြပါတယ်။ လူပေါင်းထောင်ချည်တဲ့ ဆန္ဒပြနေသူတွေထဲ ရောက်သွားလိုက်ကြ၊ ဘေးကနေလိုက်လိုက်ကြ။ ထားဝယ်စကားကို နားမလည်ပေမဲ့ ဖြစ်နေတာတွေမှန်သမျှ ဘာသာပြန်စရာမလိုဘဲ သိပါတယ်။ တနေရာမှာတော့ အလှူခံ လူငယ်တယောက်ရဲ့ ခွက်ဖလားထဲကို အကြီးဆုံးပိုက်ဆံစက္ကူတရွက် ထည့်လှူလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ ရှစ်လေးလုံးအတွေ့အကြုံဆိုတာ ဒီလောက်သာရှိတယ် ပြောရမလားမသိပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစု တခုလုံးကိုတော့ ရှစ်လေးလုံးအဖြစ်သနစ်ကြီးကနေ မထင်မှတ်တာတွေ၊ မမျှော်မှန်းတာတွေဟာ တသက်တာအတွက် ဆက်တိုက်ဖြစ်လာစေဘို့ သန္ဓေပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေက အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲလာနေပါပြီ။ (မဆလ) အစိုးရ ဘယ်လိုမှလုပ်မရတော့ပါ။ ထားဝယ်လူထုကိုကြည့်ပြီး၊ အလုပ်ခွင်ရှိရာ ဟိန်းဇဲသတ္တုတွင်းကို ပြန်မသွားတော့ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးတွေ ဒီအတိုင်းထားခဲ့တယ်။ အစိုးရအလုပ်ဆိုတာလဲ ကမ္မသကာ။ လစာ၊ ပြောင်းရွေ့ခရီးစရိတ်လဲ နောင်ခါလာနောင်ခါဈေး။ ကိုယ်လိုပဲ ရှစ်လေးလုံးကနေ ဘဝကို သွက်သွက်ခါ အပြောင်းခံရသူတွေ ထုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။ ထားဝယ်ကနေ မိသားစုရှိရာ မုံရွာ-ပုလဲပြန်ဘို့ ရန်ကုန်ကို လေယာဉ်စီးပြီးမှ မီးရထားနဲ့ သွားရမယ်။ ထားဝယ်ကနေ လေယာဉ် မထွက်တော့ပါ။ လေဆိပ်ကို ၃-၄ ရက် သွားစောင့်ကြရတယ်။ လေယာဉ်ကို လှမ်းမြင်နေရပေမဲ့ အောက်မဆင်းလို့ ပြန်လာရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ထိုင်ခုံနှစ်နေရာရလို့ မြန်မာ့လေကြောင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ကနေ မြို့ထဲသွားဘို့ တက်စီမရှိပြန်ပါ။ ဟိုမေးသည်မေး၊ နောက်ဆုံး ကားကြုံတစီးရပါတယ်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးမှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေကနေ ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့သလဲလို့ မသိနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက လူမသိအောင်နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ရိုးစဉ်းတဲ့လူတွေကလဲ လူမသိအောင် အချင်ချင်း ရိုင်းပင်းကူညီကြပါတယ်။
တည်းခိုမဲ့ စမ်းချောင်းရောက်အောင် သစ်ပင်တွေ၊ အတားအဆီးတွေ အများကြီးကို ကျော်လွှားကြရတယ်။ တည်းမဲ့အိမ်က မိတ်ဆွေဖြစ်သူ မြို့နယ်ကောင်စီက ဗိုလ်မှူးတဦးအိမ်။ တခြားလဲ အဆင်ပြေတာမရှိပါ။ အိမ်ရှေ့ဝရန်တာ ထွက်ပြီး နေရှင်နယ် ဓါတ်ခဲ ၂ လုံးသုံးရေဒီယိုကို လက်ကမချအောင် သတင်းနားထောင်ရတယ်။ BBC နဲ့ AIR က အဲဒီကာလမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးပါ။ ရေဒီယိုနားထောင်တာမှန်ပေမဲ့ စစ်ဗိုလ်အိမ်မှာတည်းနေတာမို့ လမ်းပေါ်ကလူတွေက ထောက်လှမ်းရေးလား အထင်မှားကြတာကို သိလာတော့မှ ဆင်ခြင်ရပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်-မန္တလေး မီးရထားလဲ မပြေးပါ။ ၄-၅ ရက်စောင့်ရပြီးမှရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ၁၅ နှစ်တိတိ တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ အစိုးရအလုပ်ကို တကယ့်ဖေါင်ဖျက်သလို နောက်ကြောင်းမကြည့်ဘဲ မိသားစုရှိရာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့ကို ပြန်ရောက်ပါတော့တယ်။ မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းဆုံမှုကိုလဲ နောင်မှာတခါထပ်ကြုံရပြန်ပါတယ်။ ဖေါင်ဖျက်ရတာလဲ သည်တခါထဲမဟုတ်တာကို နောက်မှသိရပါတယ်။ မြို့က သေးပေမဲ့ ပုလဲမှာလဲ ရှစ်လေးလုံး လှုတ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေကနည်းတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ မသိမရှိကြပါ။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေလဲ လမ်းပေါ်ထွက်အော်တယ်။ ကျွန်တော်က အစိုးရအလုပ်ကို မထွက်ရသေးပါ။ ဆန္ဒပြသူတွေအတွက် ကိုယ့်ဖါကိုယ် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့လုပ်ပြီး ကူညီရပါတယ်။ နောက်တက်လာတဲ့ စစ်အစိုးရကနေ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ကို သူတို့ရဲ့ အရံအင်အားအဖြစ်သာ အသုံးချခဲ့တာကို တွေ့မြင်ရတော့ အတော်စိတ်နာပါတယ်။
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပါပြီ။ NLD ဖွဲ့ပါပြီ။ NLD စီအီးစီ (ကွယ်လွန်သူ) ဆရာမောင်သော်က ပုလဲအထိ ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် အစိုးရဆရာဝန်အလုပ်က မထွက်ရသေးလို့ သူ့စကားဝိုင်းမှာ မပါနိုင်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပုလဲမှာ NLD ဖွဲ့ဘို့လုပ်ကြတော့ ကျွန်တော့်အိမ်က လူမသိစေတဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းမှန်သမျှ အရင်က (မဆလ) ထဲမဝင်ရင် ရာထူးမတိုး၊ ပစားမပေးခဲ့ရာကနေ ရှစ်လေးလုံးတန်ခိုးနဲ့ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရဖြစ်လာပါတယ်။ (မဆလ) ကံမကောင်းပေမဲ့ ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်ရင် အစိုးရ အလုပ်ကနေ ထွက်ပါတဲ့။ အဲဒီခေတ်မှာက ဆရာဝန်အလုပ်ရဘို့ထက် ထွက်ဘို့ကပိုခက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကိုဆင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဦးစီး ညွှန်ချုပ်ရုံးသွား အလုပ်ထွက်စာတင်ပါတယ်။ တပါတ်သာကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ထွက်ခွင့်ရပါတော့တယ်။ ဒီအတွက်တော့ကျေးဇူးပါ စစ်အစိုးရခင်ဗျား။ ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်းကြီးကနေ NLD ကို ဖွဲ့စည်းစေဘို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါ။ ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းနဲ့ NLD မှာ ဆင်တူတာတွေရှိပါတယ်။ လူပေါင်းစုံပါတယ်။ ပညာအခြေခံအမျိုးမျိုး၊ ပရိဒေသနအမျိုးမျိုး၊ အတွေးအမြင်အမျိုးမျိုး၊ လိုအင်ဆန္ဒအမျိုးမျိုးတွေလာပြီး စုဝေးတဲ့နေရာအတူတူဖြစ်တယ်။ ၂၅ နှစ်အကြမှာအထိ သံမှိုနှက်ထားသလို ဆက်ပြီး မြဲခိုင်နေသူတွေ ရှိသလို၊ ဘဝအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်ကျော်ပြီးသကာလ ရောက်ရာကနေ ဆက်ပြီးသံယောဇဉ်းကြီးနေသူတွေလဲ ရှိတယ်။ ဖါသိဖါသာသမားတွေလဲ မရှားဘူး။ အချိန်ကာလဒဏ်၊ နိုင်ငံရေးဒဏ်တွေ ထုထောင်းခံရလို့ ကျေမွသွားသူတွေ၊ ပန်းပဲဖိုမှာ မီးထဲကဆယ်ပြီး ပေပေါ်မှာထုရိုက်ထားလို့ သံကောင်းကောင်းတွေဖြစ်လာသူတွေလဲ မရှားပါ။ သေခွဲခွဲကြရသူတွေ အများကြီးရှိနေပါပြီ။ NLD မှာ မျိုးဆက်သစ်ဆိုသူတွေ မနည်းမနောရှိလာပါပြီ။ ရှစ်လေးလုံးမှာတော့ အသစ်ဆိုတာ မရှိပါ။ အဟောင်းသည်သာ အမာခံဖြစ်တယ်။ သမိုင်းရေးသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သမိုင်းကောင်းအမွေ ဆက်လက်ပေးနိုင်ကြပါစေ။
• နိုင်ငံရေး ရေးကြ၊ ပြောကြ၊ ဟောကြတယ်။ ပညာရှင်တွေဆီကအသံတွေပါ ထပ်ထွက်လာတာ သတိထားမိတယ်။ အဖြူတွေရော၊ တိုင်းရင်းဖြစ်တွေပါရေးတာတွေ့ရတယ်။ သီအိုရီတွေ၊ ဝေါဟာရတွေလဲပါတယ်။ မျှဝေပေးသူတွေရေးတဲ့ ဗမာစာထဲမှာ ဗိုလ်လိုသုံးတာတွေလဲညှပ်ပါတာတွေ့ရတယ်။
• ရေးတာတွေ၊ ပြောတာတွေကို မလိုက်နာကြလို့လားတော့မသိပါ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ နှစ်အစိတ်ကြာတော့လဲ ဒုံရင်းဘဲရှိသေးတယ်။ • ခက်ခဲတာတွေ၊ မြင့်လွန်းတာတွေ၊ ပညာရှင်ဆန်တာတွေကို ဘေးဖယ်ထားသင့်တယ်လို့ သိလာတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဟာ ရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်။ • အုပ်စိုး၊ အနိုင်ယူ၊ လူလည်ကျနေသူတွေက လူတွေထဲကဘဲ။ အတ္တကြီးတယ်။ ငါ့ဘို့သာလုပ်တယ်။ ငါမိသားစုနဲ့ ငါ့ဆွေမျိုး၊ ငါနဲ့ ငါ့လူတွေအတွက်သာ ဦးစားပေးလုပ်တယ်။ ကြားကောင်းအောင်တော့ပြောမယ်။ ဝါဒဖြန်ချိရေး လုပ်မယ်။ • လုပ်နိုင်စွမ်းကလဲ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ဖွဲ့ထားပြီးသားဆိုတော့ အနှစ် ၅ဝ ကလုပ်နေကြအတိုင်းဘဲ၊ ၂၅ နှစ်မှာလဲ လုပ်နေကြတာဘဲ။ • သူတို့ဘက်မှာလဲ၊ လူလိုဘွဲ့တွေ၊ ရဟန်းလိုဘွဲ့တွေ၊ ဒေါက်တာဘွဲ့တွေ ရထားသူတွေက မနည်းပါ။
• မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနားလည်ဘို့ရာ ပီအိတ်ခ်ျဒီဘွဲ့ မလိုပါ။ လမ်းပေါ်ကလူတွေသိသလို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ‘ပြောင်းတာမရှိ၊ ကောင်းလာတာမရှိ၊ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း ဝိုင်းဝန်း လုပ်ကြရမယ်’ လို့သာသိရပါမယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Easy-going အလွယ်ခေတ် • ကျွန်တော်က ပြည်ပမှာ ပြည်ပြေးဘဝနဲ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲလွန်းတဲ့ကာလတွေတုံးကလဲ အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးကို တာဝန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ နည်းနည်းလွယ်လာတော့ အထဲကလူတွေလာတိုင်း သွားတွေ့တယ်၊ အိမ်ကိုလဲဖိတ်ပါတယ်။ အခြေအနေအမှန်ကို သိချင်လို့ပါ။
• မခုလို အထဲ-အပြင် သွားရလာရတာလွယ်ကူလာတော့ ပိုသိလာရတွေက ကျေးဇူးကြီးပါတယ်။
• ကျွန်တော် လက်လှမ်းမီသူတွေက အတန်းအစားစုံပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်နေသူတွေ၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ မဆိုင်သူတွေလဲပါတယ်။ • ‘ဖေ့စ်ဘွတ်’ ခေတ်စားလာတော့ ဆက်သွယ်မှုတွေက သိပ်လွယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ‘ဖေ့စ်ဘွတ်’ ရဲ့ အားနည်းချက်က သိတာ၊ ကြားတာကို တခါတည်း တန်းတင်ကြ၊ ရေးကြတာက များလှတယ်။ တန်းယုံကြရင် မမှန်တာတွေပါတယ်။ များများဖတ်တော့ နည်းနည်း ပိုသိလာရတယ်။ ဒါလဲ တကယ့်အမှန်ဆိုတာ ဝေဝါးနေသေးတာတွေ ရှိတာဘဲ။
• နောက်ပြီး ‘အဖြူနဲ့အမဲ’ နှစ်မျိုးကသိသိသာသာများတယ်။ အကြောင်းအရာတခုမှာ ကြိုက်-မကြိုက်၊ ကောင်း-ဆိုး၊ ဒီနှစ်မျိုးကို တန်းခွဲခြားလိုက်တယ်။ မရုန့်မလွန်နည်းတယ်။ ဆင်ခြေတွေ၊ အကြောင်းပြချက်တွေပါပေမဲ့ တချို့ကိုတော့ ကျွန်တော် သဘောမတူနိုင်ပါ။ • ရေဒီယိုတွေနားထောင်ရတာက အမှားနည်းတယ်။ အမြဲတန်း အမှန်ချည်းတော့ မဟုတ်ပြန်ပါ။
• အမှန်-အမှားပြဿနာအပြင် ရှုတ်ထွေးအောင်၊ လမ်းလွဲအောင်လုပ်တာကလဲ ရောပါနေသေးတယ်။ • ဒါကြောင့် ဘာကိုမှမယုံရဘူး၊ မဖတ်ဘဲနေတာကောင်းမယ်တော့ မထင်သင့်ပါ။ ကိုယ်ခံအားကောင်းနေရင် သူများတွေညာတာ၊ ဆွဲဆောင်တာကိုမခံရပါ။ ဒီလိုပြောတာကလွယ်ပေမဲ့ လက်တွေမှာကခက်လှတယ်။
• သိရသလောက် ‘ဖေ့စ်ဘွတ်’ ကို ‘စမတ်ဖုန်း’ ကနေ သုံးနေကြတော့ ခေါင်းစဉ်လောက်နဲ့ပြီးကြသူက များပုံရတယ်။ • ဖတ်ရတာ၊ မြင်ရတာကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ယုံလိုက်ကြတယ်။ ရေးတာသားတာကိုလဲ လွယ်လွယ်နဲ့ မြန်မြန်သာလုပ်လာရတော့တယ်။ ရေးထားတဲ့ စာလုံးပေါင်းအမှား၊ သတ်ပုံအမှား&